Greenwashing, fanao ara-barotra "maitso" | Bezzia
Greenwashing, fomba fanao ara-barotra "maitso".
Maria vazquez | 14/05/2022 10:00 | ankehitriny
Ovainao ho amin'ny fomba maharitra kokoa ve ny fahazarana fanjifanao? Angamba eny an-dalana dia hanana fisalasalana maro mifandraika amin'ny fahamarinan'ny zavatra ezahin'ny etik'ity vokatra ity ianao hamidy anao. Ary mora ny manao izany niharan'ny fanasan'ny maitso.
Ny orinasa dia tsy manao ny rariny foana amin'ny azy tetik'asa ara-barotra. Ny fanadihadiana sasany dia milaza fa ny 4,8 amin'ireo vokatra voafaritra ho "maitso" ihany no tena mamaly ny toetrany. Ahoana no hamantarana azy ireo sy ny fihetsika manohitra ny fanasan-damba maitso?
1 Inona no atao hoe Greenwashing?
2 Ahoana ny mamantatra azy?
2.1 Tatitra ny fisolokiana
Inona no atao hoe Greenwashing?
Andeha isika hanomboka amin'ny voalohany. Inona no atao hoe greenwashing? Raha fintinina dia azo lazaina fa a fanao ara-barotra maitso Natao hamorona sary manjavozavo momba ny andraikitra ara-tontolo iainana, manararaotra ny fahasosorana sy ny fitondran-tenan'ny olona izay mampiasa ireo serivisy na vokatra ireo.
Tsy zava-baovao ny teny izay avy amin'ny teny anglisy maitso (maitso) sy manasa (manasa). Araka ny Encyclopedia of Corporate Social Responsibility dia ny mpiaro ny tontolo iainana Jay Westerveld izay namorona io teny io tamin'ny lahatsoratra tamin'ny 1986, avy eo dia manondro ny indostrian'ny hotely.
Antsoina koa hoe eco whitening, ecological washing na eco imposture, greenwashing mamitaka ny vahoaka, manantitrantitra ny fahazoan-dàlana momba ny tontolo iainana amin'ny orinasa, olona na vokatra rehefa tsy manan-danja na tsy mitombina ireo.
Ity fanao ratsy izay ataon'ny orinasa maro ankehitriny ity mba hanadiovana ny sariny sy hahazoana mpanjifa dia misy vokany lehibe izay misy fiantraikany ratsy amin'ny mpanjifa, ny tsena ary, mazava ho azy, ny tontolo iainana.
mitarika ho amin'ny fahadisoan'ny fiheverana ao amin'ny mpanjifa ary manararaotra ny fanirian'ny mpanjifa hanangana kolontsaina tsara momba ny tontolo iainana.
Tsy vitan'ny hoe tsy mitranga ny tombontsoa nambara, fa miteraka fiantraikany lehibe kokoana amin'ny fampitomboana ny fanjifana.
Manimba ny orinasa hafa izany, satria mitarika fifaninanana tsy ara-drariny, tsy mifanaraka amin'ny andraikitry ny fiaraha-monina.
Ahoana ny mamantatra azy?
Mba hialana amin'ny fanasana maitso dia mila mahafantatra ny fomba hamantarana azy ianao. Inona avy ireo paikady ampiasain'ny orinasa hamoronana io fiheverana ny andraikitra ara-tontolo iainana na ny faharetana io? Ny fahafantarana azy ireny dia hanampy antsika hitandrina kokoa sy ho mailo kokoa amin’ny hafatra sasany.
Mitandrema amin'ny "voajanahary", "100% eco" ary "bi(o)". Raha manasongadina ireo karazana fitakiana ireo ny vokatra ary tsy miaraka amin'ny fanazavana amin'ny antsipiriany, dia mampiahiahy. Rehefa tena organika ny vokatra dia tsy misalasala manome fanazavana amin'ny antsipiriany sy mazava momba ny akora sy ny fomba famokarana azy.
Fadio ny fiteny tsy mazava. Paikady mahazatra iray hafa dia ny fampidirana teny na teny izay manondro ny tombontsoa maharitra na ny tontolo iainana nefa tsy misy foto-kevitra na fototra mazava.
Aza avela hamitaka anao ny loko: Ny fiantsoana maitso amin'ny etik'izy ireo dia mahazatra amin'ireo orinasa izay te handresy lahatra anao amin'ny fifandraisany amin'ny faharetana sy ny fikarakarana ny tontolo iainana. Mazava ho azy, satria ny vokatra mampiasa ny loko maitso dia tsy tokony hieritreritra izao fa misy fitaka, fa tsy ampy ny mifidy izany.
Tsy natao hanohanana tanjona maitso Maitso izy io. Tsy ampy ihany koa ny fanohanan’ny orinasa ny fikambanana miady amin’ny tontolo iainana mba hiantohana ny vokatra na ny rafi-pamokarana ny orinasa.
Raha vao fantatra ny tetika fototra, ny fomba tsara indrindra hialana amin'ny fitaka dia vakio tsara ny etikety ary manaparitaka ny firafitry ny vokatra. Ahoana raha tsy ao amin'ny marika ny fampahalalana tadiavintsika? Avy eo ianao dia afaka mikaroka azy ao amin'ny tranokalany. Miahiahy raha tsy eo koa; Ny tsy fahampian'ny fampahalalana mazava sy mazava dia matetika mahatonga ny fanairana.
Rehefa mamaky ny etikety dia tena manampy tokoa ny mahafantatra ny fanamarinana avy amin'ny antoko fahatelo tsy tafiditra. Tsy mitovy ny sandany ny hajia rehetra; tadiavo ireo manome antoka amin'ny sehatra espaniola sy eoropeana. Efa niresaka tany Bezzia momba ny fanamarinana lamba ary mampanantena izahay fa hanao izany alohan'ny Ecolabels Eoropeana hafa izay miantoka ny fiantraikany voafetra amin'ny tontolo iainana.
Tatitra ny fisolokiana
Rehefa mahita hosoka ianao dia aza manatsoaka hevitra fa lazao! Azonao atao izany amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy, ao anatin'ny orinasa iray ary mazava ho azy ho mpanjifa amin'ny iray amin'ireo fikambanana miaro ny mpanjifa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » ankehitriny » Greenwashing, fomba fanao ara-barotra "maitso".
Ahoana no hampianarana ny zanakao hisotro amin'ny kaopy